Ekwentị iQOO Neo3 gafere n'aka AnTuTu | Gam akporosis
Este Eprel 23 na-esote Anyị ga-anabata ọnụọgụ ọhụụ ọhụrụ dị na ahịa, nke ekwenyelarị iQOO Neo3. N'ụbọchị ahụ, anyị ga-amata njirimara niile na nkọwapụta aka ọrụ ya, agbanyeghị na anyị amatala ọtụtụ njirimara isi ya.
Tupu ụbọchị ahụ abịarute, AnTuTu, n’enweghị ndidi dịka ọ dị, buliela mkpanaka iji nyochaa ike ya na arụmọrụ ya n’elu ikpo okwu ule ya. Ihe nlere anya, dika ọ dị na mbụ, akọwapụtawo ọtụtụ akara nke otu ihe ma kpughee nke ikpeazụ nke na-achikọta ike nke ọkọlọtọ a na-etu ọnụ. E gosipụtara njide n'okpuru.
N'amaghị ama, iQOO Neo3 na-abịanụ, nke edepụtara na benchmark database n'okpuru nọmba nlereanya V1981A, nweta a ngụkọta nke akara 608,801, ihe na tumadi n'ihi na ọ na-nri site na High-end Qualcomm Snapdragon 865 mgbawa, processor nke e jikọtara ya na 8 GB Ram na 3.1 GB UFS 256 ohere nchekwa dị n'ime. Mgbe akara ngụkọta ahụ mebiri, anyị hụrụ na ọnụ ọgụgụ arụmọrụ dị elu na-enweta ihe 182,986 maka CPU, 223,339 isi maka GPU, ihe 104,916 maka MEM (ebe nchekwa) na 97,560 isi maka UX.
iQOO Neo3 na AnTuTu
AnTuTu na-ekwu na iQOO Neo 3 na-abịanụ abụrụla nke otu n'ime smartphones kacha mma na ogo UX, n'ihi ngosipụta ngosipụta nke Hz 144 Hz. Nke a bụ n'ihi na ngosipụta ọnụego dị elu dị elu na-arụ ọrụ dị mkpa iji nweta akara dị elu na akara aka ugbu a. algọridim ule.
Eziokwu ọzọ na-adọrọ mmasị nwere ọnụahịa nke ekwentị a. O doro anya, Ọ ga-abụ ngwaọrụ dị ọnụ ala nke Snapdragon 865 dị n'ahịa, ihe na-egosi na ọ ga-abụ na ọnụahịa nke 400-500 dollar ma ọ bụ euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » AnTuTu kwadoro Snapdragon 865 maka iQOO Neo3 ma kpughee arụmọrụ anụ ọhịa ya
Anyị ga-enweta akara ngosi DxOMark na igwefoto Galaxy S20 Ultra n'oge na-adịghị anya